Shiinaha Hard top laalaabka afar qof warshad teendhada iyo alaab-qeybiyeyaasha | Yuancheng
Waxyaabaha: ABS + ASA + qalin daboolan Oxford maro + suuf polyester + tuubada aluminium + suuf luul + suuf isbuunyo + shabaqa kaneecada polyester madow
ku habboon in la laalaabo / lagu qalajiyo jaranjaro laba jibbaaran, 3-4 qof ayaa isticmaala.
* Qolof sare: ABS + ASA;
1. Furid iyo otomaatig otomaatig ah bilawga guga;
2. Jaranjarada telescopic-ka waxay si toos ah ugu xiran tahay teendhada saqafka, tallaabooyinka rarka iyo dejinta waa sahlan oo habboon;
3. Gogosha sariirta waxaa lagu duubay bartamaha, oo ku habboon SUV-yada dhexdhexaadka ah iyo kuwa waaweyn;
5. Tolliinka Meel walba ayaa lagu daweeyaa daweynno biyuhu diidaan.
6. Teendhada waxaa ku yaal laba bac oo kabaha kala bixin kara ah;
7. Dusha sare ee isku laaban ayaa loo isticmaali karaa sidii dabool roob ah oo aan lahayn dabool gaar ah oo roob ah, taas oo ay fududahay in la shaqeeyo.
Daboolka kore waa qolof adag, waxay ku habboon tahay in la laalaabiyo / lagu qalabeeyo jaranjaro laba jibbaaran, aamin ah oo la isku halleyn karo / waasac ah, oo qaadi kara 3-4 qof.
Hore: Taabbuugga saqafka sare ee otomaatiga gawaarida adag / teendhada saqafka sare ee gawaarida gacanta
Xiga: Teendhada saqafka sare ee gawaarida laaban ee adag
Taambuugga Gawaarida Caan ah, Mako Gaari qaboojiye, 12v Qaboojiyaha Baabuurta Qaboojiyaha, Gaari qaboojiyaha la qaadan karo 12v, Ku Dabool Baabuurka Hoostiisa, Qaboojiyaha Qamriga Gawaarida,